(၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကိုရင်လေးအဖြစ်နဲ့ သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့ သားငယ်လေး – ShwePyiAye
(၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကိုရင်လေးအဖြစ်နဲ့ သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့ သားငယ်လေး
By EditorPosted on June 29, 2020
(၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကိုရင်လေးအဖြစ်နဲ့ သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့ သားငယ်လေး သားရတနာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိဘတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ဟာ ရဟန်းဒါယိကာ ဒါယိကာမဖြစ်ချင်တာ ချည်းပါပဲ။ ကလေးတွေသင်္ကန်းနိုင်တဲ့အရွယ် ရောက်ပြီဆိုရင် ကိုရင်ဝတ်ပေးချင်ကြပါတယ်။ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့သားလေးကတော့ မိဘတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲ ကိုယ်တိုင်က သာသနာ့ဘောင်ဝင်ချင်တဲ့အတွက် အသက် (၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ ကိုရင်လေးဘဝကို ကိုယ်တိုင်ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ခံယူခဲ့ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့ အတိုင်းအသိဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ သားလေးရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ သာသနာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုစိတ်ကြောင့် မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်လည်းကြည်နူးပျော်ရွှင်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ် ကတည်းက သာသနာ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်သူမို့ မိဘတွေရဲ့အဆုံးအမတော်မှုကိုတော့ တကယ်လေးစားမိပါရဲ့။ ကြည်နူးစရာ ရဟန်းခံရှင်ပြုအလှူလေးကို ” ၂၉. ၆. ၂၀၂၀ သားငယ်လေး ရဲ့ (၆) နှစ် မွေးနေ့ မှာ အမှတ်တရအဖြစ် အမွန်မြတ်ဆုံး လက်ဆောင်အဖြစ် သားငယ်လေးက ကိုရင်လေးဝတ်ပြီး ဖေဖေ မေမေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွား ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်များနဲ့ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး တို့အတွက် ကုသိုလ်ယူ မြင့်မြတ်တဲ့ ကိုရင်လေးဘဝကို ခံယူပါတယ်.လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့သားငယ်လေး သူ့ရဲ့စိတ်ကိုက ဝတ်ချင်လို့ ဝတ်ပေးရတဲ့ အတွက် မိဘအနေနဲ့ အလွန်အမင်းကျေနပ်ကြည်နူးမိပါတယ်. သားငယ်လေးရဲ့ဘဝမှာ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကျန်းမာခြင်းတွေလာဘ်ရွှင် ပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ အနာရောဂါကင်းဝေးပြီး အသက်ရှည် အနာမဲ့ ဘုန်းကံကြီးပြီး လူသားပီသတဲ့လူ ကိုယ်ချင်းစာတရား အပြည့်နဲ့ ကုသိုလ်တွေနဲ့အမြဲရှင်သန်ပြီး အမျိုးဘာသာသာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်သော သူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ပြီး တရားထူး တရားမြတ်ကို ငယ်စဉ်ထဲက လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အနှောက်အယှက်ကင်းစွာရပြီး ပြုသမျှကုသိုလ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ ဖြစ်ရပါစေသား Happy Birthday သားငယ်လေး ” ဆိုပြီးဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
Photo – Zin Zin Zaw Myint
(၆) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွာ ကိုရင္ေလးအျဖစ္နဲ႔ သာသနာ့ေဘာင္ကိုဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ရဲ႕ သားငယ္ေလး သားရတနာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့မိဘတိုင္းရဲ႕အိပ္မက္ဟာ ရဟန္းဒါယိကာ ဒါယိကာမျဖစ္ခ်င္တာ ခ်ည္းပါပဲ။ ကေလးေတြသကၤန္းႏိုင္တဲ့အ႐ြယ္ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ကိုရင္ဝတ္ေပးခ်င္ၾကပါတယ္။ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ရဲ႕သားေလးကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕တိုက္တြန္းမႈမပါဘဲ ကိုယ္တိုင္က သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ခ်င္တဲ့အတြက္ အသက္ (၆) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ေလးမွာ ကိုရင္ေလးဘဝကို ကိုယ္တိုင္ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ကေတာ့ အတိုင္းအသိဝမ္းသာေနခဲ့ပါတယ္။ သားေလးရဲ႕ပင္ကိုယ္စိတ္ေလးနဲ႔ သာသနာကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္လိုစိတ္ေၾကာင့္ မိဘေတြ ကိုယ္တိုင္လည္းၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီး သာသနာ့ေဘာင္ကိုဝင္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ ကတည္းက သာသနာ့ကိုယုံၾကည္ကိုးကြယ္တတ္သူမို႔ မိဘေတြရဲ႕အဆုံးအမေတာ္မႈကိုေတာ့ တကယ္ေလးစားမိပါရဲ႕။
ၾကည္ႏူးစရာ ရဟန္းခံရွင္ျပဳအလႉေလးကို ” ၂၉. ၆. ၂၀၂၀ သားငယ္ေလး ရဲ႕ (၆) ႏွစ္ ေမြးေန႔ မွာ အမွတ္တရအျဖစ္ အမြန္ျမတ္ဆုံး လက္ေဆာင္အျဖစ္ သားငယ္ေလးက ကိုရင္ေလးဝတ္ၿပီး ေဖေဖ ေမေမ ဖိုးဖိုးဖြားဖြား ဦးဦး ေဒၚေဒၚမ်ားနဲ႔ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါး တို႔အတြက္ ကုသိုလ္ယူ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ကိုရင္ေလးဘဝကို ခံယူပါတယ္.လိမၼာေရးျခားရွိတဲ့သားငယ္ေလး သူ႔ရဲ႕စိတ္ကိုက ဝတ္ခ်င္လို႔ ဝတ္ေပးရတဲ့ အတြက္ မိဘအေနနဲ႔ အလြန္အမင္းေက်နပ္ၾကည္ႏူးမိပါတယ္. သားငယ္ေလးရဲ႕ဘဝမွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ က်န္းမာျခင္းေတြလာဘ္႐ႊင္ ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ အနာေရာဂါကင္းေဝးၿပီး အသက္ရွည္ အနာမဲ့ ဘုန္းကံႀကီးၿပီး လူသားပီသတဲ့လူ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား အျပည့္နဲ႔ ကုသိုလ္ေတြနဲ႔အၿမဲရွင္သန္ၿပီး အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ၿပီး တရားထူး တရားျမတ္ကို ငယ္စဥ္ထဲက လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာရၿပီး ျပဳသမွ်ကုသိုလ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ရပါေစသား Happy Birthday သားငယ္ေလး ” ဆိုၿပီးေဝမွ်ခဲ့ပါတယ္။
Previous post ဇွဲကပင်တောင်မှာ ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းသွားတဲ့ မိန်းကလေးအတွက် မခံစားနိုင်လွန်းလို့ ငိုချင်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဇေရဲထက်
Next post သူမကိုယ်တိုင်မွေးဖွားပေးထားတဲ့ မွေးကင်းစကလေးလေးကိုကြည့်ပြီး လက်ကမချနိုင်အောင် ချစ်မဝနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ပိုးမမှီသာ
အငယ်ဆုံးသားလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ စိတ် ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ တရားဘာဝနာအားထုတ်နေတဲ့ ယုန်လေး
အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းမှာ ချစ်ဇနီးလေးကို မထွေးပွေ့ရတဲ့အတွက် မနက်ခင်းကမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ ရွှေထူးရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကြွေကျခဲ့ရတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
(၁၀)တန်းစာမေးပွဲ ကျရှုံးသွားတဲ့ ညီမလေး စိမ်းလဲ့ကို မဆူတဲ့အပြင် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ အားပေးစကားပြောခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
မလိမ္မာခဲ့တဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် (၁၀)တန်းစာမေးပွဲ ကျရှုံးခဲ့ရကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ အသိပေးလာတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ညီမ စိမ်းလဲ့ရတနာ
သိန်းပေါင်း(၆)သောင်းကျော် လှူဒါန်းပေမဲ့ နားကပ်တောင် မဝတ်တဲ့ မြန်မာသူဌေးမလေး…
ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးလေးဘာသာနဲ့ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် ဂျူလီယာပါဝါ
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး တစ်သတ်စားမ​ကုန်နိုင်အကြောင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာ အကောင်းအဆိုးတွေအတူတူ ဝေမျှရင်းရှိခဲ့ပေးတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မေဦး
၆ နှစ်ကျော်ကြာ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြတ်စဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းအမှန်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
ပရိသတ်ကို စိန်ခေါ်တဲ့ တိုင်ရွန်ကို by 1 ထိုးဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မအူပင်သား ပွဲကတော့လှပြီ (ရုပ်/သံ)
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆယ်တန်းမအောင်ခဲ့ပေမယ့် ညီလေး၊ညီမလေးအားလုံးကို အောင်စေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး
မြန်မာတစ်နိင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံး (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ထုတ်ပေါ်လာပါပြီ
YGW မိဘမဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းက ကလေးငယ် ၆၅၀ စာအ တွက် လိုအပ်တာတွေ ကို ဖြည့်စွက်လှူဒါန်းနိုင် ဖို့ မတည်ပေးမယ် ဆို တဲ့ ယုန်လေး
အမြတ်နိုးဆုံး ဆံပင်ကို ဘုရားဋ္ဌာပနာထဲထည့်လှူကာ သီလရှင်အဖြစ်ခံယူသွားတဲ့ စစ်လွန်းဝတီထက်